ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ပံတန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ပံတန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လက်ပံတန်းမြို့၊ ကံကြီးလမ်း၊ ဘီးလင်းတန်းလမ်းဆုံတွင် အစိမ်းရောင် ဂွန်ဒေါင်းယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် (ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ အခြား) ခွဲသား(၂၈၄) ချောင်း (၄.၇၁၄၆) တန် နှင့်အတူ တရားခံ (၃) ဦးဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန သစ်တောဝန်ထမ်းများမှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများသည် တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ မအီချောင်း၊ သဒွန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် (၃) ဖာလုံခန့်အကွာ ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း (Y-313445)နေရာတွင် စက်လှေတစ်စီးပေါ်မှ တရားမဝင် အခြားခွဲသား (၅၀) ချောင်း၊ (၅.၄၀၈၄) တန် အား သိမ်းဆည်းရမိပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သန္တုတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သန္တုတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ကျွန်းစုမြို့နယ် စမုံချောင်းလက်တက် ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း (MP- 615590) နေရာတွင် (၄၈ပေ x ၁၃ပေx ၅ပေ ၂လက်မ) အရွယ်အစား တရုတ်အင်ဂျင် (25 H-P) တပ်ဆင်ထားသောစက်လှေ (၁) စီးပေါ်မှ အခြား (သစ်/ တိုင်) ၅၂ လုံး၊ ၃.၆၈၄ တန်အား သိမ်းဆည်းရမိပါသည်။
ကယားပြည်နယ်၊သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးဆောင်သည့် သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ်၊သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးဆောင်သည့် သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ဘောလခဲ-ဒေါတမကြီး ကားလမ်း မိုင်တိုင် (၆/၀) နှင့် (၆/၁)ကြား နေရာတွင် ယာဉ်အမှတ် (3J/6097) တပ်ဆင်ထားသည့် ဒန်ဘာ အမျိုးအစား အဖြူရောင် (၆) ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင်(ပိတောက်၊ အင်ကြင်း၊ အင်) ခွဲသား(၇၁) ချောင်း၊ (၂.၁၃၃၆) တန် နှင့်အတူ တရားခံ (၁) ဦး ဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သစ်တာဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သုဝဏ္ဏမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊အသိသက်သေများ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၄.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သစ်တာဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သုဝဏ္ဏမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊အသိသက်သေများ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကမာကြည်လမ်း၊ ကမာကြည် တံတားထိပ်တွင် ယာဉ်အမှတ် (YGN-9G/8018) တပ်ဆင်ထားသော CANTER အမျိုးအစား အဖြူရောင် (၆) ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် ကျွန်းခွဲသား (၅၄) ချောင်း ၊ (၄.၂၂၆၆) တန် ၊ နှင့်အတူ တရားခံ (၂) ဦးဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကျောက်မဲခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆောင်သည့် သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော အဖွဲ့မှတရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကျောက်မဲခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆောင်သည့် သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော အဖွဲ့သည် နယ်မြေရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ကြိုးပြင် (XXIV)၊ ခန့်မှန်း မပည (KG-512063),(KG-508067), (KG-506068) နှင့် (KG-507069) နေရာများတွင် တရားမဝင် (ကျွန်း၊ပိတောက်) သစ်/တိုင်/ဓားရွေ (၁၄၉)လုံး (လုံး/တုံး)(၁၈.၆၄၃၆ ) တန်၊ တရားခံ (၁) ဦး၊ တုန်ဖုန်းအမျိုးအစား (၆)ဘီးယာဉ် (၂) စီး ၊ ချိန်းစော(၁)လက်၊တို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ သစ်တောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ခရိုင်မှုခင်း၊ စ. ရ .ဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ သစ်တောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ခရိုင်မှုခင်း၊ စ. ရ .ဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် လားရှိုးမြို့၊ မြို့ရှောင်လမ်း ယာဉ်အမှတ် (YGN-3J/1681) နှင့်ယာဉ်အမှတ် (MDY-6G/5718) တပ်ဆင်ထားသည့် FUSO အမျိုးအစား (၁၂) ဘီးယာဉ် (၂) စီးပေါ်မှ တရားမဝင် တမလန်း(ဓားရွေ/သစ်လုံး)၊ ၉၃(လုံး/တုံး) (၈.၉၂၀၆)တန်နှင့်အတူ တရားခံ(၄) ဦး ဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်မှုခင်းအကူဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့မှတရားမဝင်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၂.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ ခရိုင်မှုခင်းအကူဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ လွိုင်လင်မှ ပင်လုံမြိုသို့အဝင် ရဲကင်းအနီးတွင် ယာဉ်အမှတ် (3B/ 4220) တပ်ဆင်ထားသည့် Nissan Fuso အမျိုးအစား အစိမ်းရောင် (၁၂)ဘီး ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် ပိတောက်ဓားရွေ (၁၂) တုံး၊ ၂.၀၅၉ တန်နှင့်အတူ တရားခံ (၂) ဦးဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများမှ တရားမဝင်သစ်များဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၅.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများသည် တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲကျက်ကုန်းရွာနှင့် ချောင်းဖြူရွာ ချင်းဆက်တံတားတွင် ယာဉ်အမှတ် (5M-4729) တပ်ဆင်ထားသော FAW အမျိုးအစား အပြာရောင်ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင်အခြားခွဲသား (၈၁)ချောင်း ၊ (၁.၁၆၈၂) တန် နှင့်အတူ တရားခံ (၂) ဦးဖမ်းဆီးရမိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သစ်တောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောအဖွဲ့မှ တရားမဝင်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၃.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် သစ်တောလုံခြုံ ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် ကောလိယချောင်းဘေး ခန့်မှန်း မ.ပ.ည (KV-269883) နေရာတွင် ယာဉ်အမှတ်မပါ HINO အမျိုးအစား အပြာနုရောင် (၆) ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် ကညင်ခွဲသား (၂၄) ချောင်း ၊ (၃.၀၄၆၂) တန်အား သိမ်းဆည်းရမိပါသည်။
သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးသက္ေရာက္ေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း႐ံုးဖြင့္ပြဲ